Tsy misy maharatsy an'izay akory, fa nahavariana ahy fotsiny izay hoe izay mitovy firehana amin'ny filoha izay. Ka raha izay manko, dia maro ny tsy mitovy fomba firehana amin'ny Filoha, fa manana hevitra hafa azo anampiana ny filoha sy ampandrosoana ny firenena.
Marina fa fitiavan-tanindrazana no resahina, fa ny manam-pahaizana dia manana ny asa fivelomany ihany koa, ka tsy anary ny fivelomany izy raha tsy mazava na ny karama, na ny type de contrat, anisan'ny zavatra nanahirana teto hatrany manko ny hoe, ianao manome an-kitsipo ny fahaizanao, omenao avokoa ny plan d'action rehetra, nefa alain'ny hafa fotsiny izay, dia ianao dakany.
Raha mipetraka any ivelany izy, iza no hiantoka ny fodiany, atao ahoana ny fianakaviany, aharitra hafiriana ny asa? Sa vao miova ny governemanta dia voadaka, sa lasa fonctionnaire? Raha miova ny mpitondra, manahoana ny momba azy?
Mety hiteny ny sasany hoe fitiavan-tanindrazana, fa misy fitenenana izay hoe, "ny fisaorana tsy mahavelona vady aman-janaka".
Ny fahaizan'ny tena koa tsy hoe azo tsy nandaniana vola ka omem-potsiny. Ny anay izay efa nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena, dia rariny raha nahampahafantarinay ny vahoaka Malagasy ny vaha olana arosonay ho an'ny firenena, fa tsy terena hanao plan d'action eo amboalohany kosa ireo vao hiditra, satria tsy hisy anome amin'izao ny fahaizany, izay misy mihitsy aza io no asa fivelomany.
Raha misy ny fakam-panahy hilaza hoe, rehefa tsy hanao dia mipetraha, aza mandefa CV, dia ny valiny dia tsotra, mahavelon-tena ary mikarama lavitra noho io omena io ireo manam-pahaizana tena ilaina, ka dia hipetraka tokoa amin'ny asa efa mahavelona azy izy.
Raha ny soso-kevitro, dia antsoy mihitsy isaky ny corps, na secteur, dia miaraka midinika ireo olona ireo ny ampandehanana ny secteur misy azy, satria efa lany ny mpitondra niaraka tamin'ny programany IEM, dia iny no iaingana hoe ahoana no anataterahina azy, aroson'ny filoha ny vahaolana efa nomaniny, dia atsaraina raha misy anatsarana azy, na taterahina raha avy dia azo taterahina.
Azo ampiasaina ny teknolojia anamora ny asa, misy efa tsara ireny partage de document ireny, ka tsy voatery hifanakaiky ny olona dia afaka miady hevitra.
Ny direction générale midina kosa dia atao concours na fifaninana, asiana texte na lalàna mihitsy hoe ny DG midina dia fifaninanana, ny direction sy chef de service midina kosa dia izay efa ao anatiny ihany no mifaninana miakatra, fa ny DG ihany no hakana olona aty ivelan'ny ministera.
Arindra miaraka amin'ny fanomezana fahefana ny faritra kosa ireo, hatramin'ny vola hiasany izay tsy atao subvention, fa avy dia fitsinjarana ny hetra, 10% ho an'ny foibe, 15% ho an'ny Faritra, 25% ho an'ny Kaominina, ary 50% ho an'ny Fokontany.
Manana 500 000 licenciés isika, tsy mila takiana 5ans d’expérience izany, fa alaina avokoa ireo tanora rehetra, fa tsinjarao amin'ny 20 000 Fokontany ny 100 000 amin'ireo manana licence, dia samy ahazo licencié 5 isaky ny Fokontany, izay atao fototry ny fampandrosoana.
Ao daholo ny asa rehetra dia vita, ankoatran'ny fanaovana mariazy izay andraikitry ny Ben'ny Tanàna, eny hatramin'ny passeport, kara-panondro, fananganana orinasa dia azo atao ao amin'ny Fokontany avokoa. Asiana ordinateur sy réseau internet ary panneau solaire, tsy mandany vola firy izany.
Professionnel mahay izany no hitantana ny Fokontany, toy izany koa ny sekoly sy ny hopitaly.
Omena fihofanana avokoa ireo rehetra hitana andraikitra amin'ny asa izay sahaniny.
Ampiasaina ireo mpampianatra mpikaroka, sy mpikaroka mpampianatra, fa tsy resaka ady karama fotsiny no ahenoana feo momba azy.
Raha tena vonona amin'izany ny Filoham-pirenena dia tsy misy fisalasalana ny manam-pahaizana anampy azy, fa raha vao manisy sivana ara-pironana politika, dia tsy ahita olona ankoatr'ireo efa nisolelaka nefa tsy mahay akory izy amin'izany, ary ahatsapa voahilika hatrany ireo nitolona nanampy azy ahalany azy, ka ireo ihany no hivadika anongana azy.